Misy raha ao | Madagascar - Actualités de la diaspora malgache en France: reportages, événements malgaches, interviews, informations
Baolina Kitra Alfa : Miandrandra amboara ny Galactic FSA
Izay efa natomboky dia tsy maintsy hofaranana. Miandrandra mafy ny anaram-boninahitra voalohany ho azy ny Galactic FSA, izay ekipa vao nisandratra saingy efa tafiditra ho isan’ireo hiatrika ny fifaninanana eo amin’ny diviziona voalohany eto Analamanga.
Rakotomalala Marcel : Miantso ireo mpilalao rugby tsy hanaiky hatao fitaovana
Naneho arofanina ny amin’ny tsy hidiran’ny baolina lavalava amin’ny mety ho fanakorontanana amin’ny sehatry ny politika omaly ny Filohan’ny federasiona malagasin’io taranja io, Marcel Rakotomalala.
Fikomiana tao Antsirabe II : Olona efatra voatifitra
Zandary telo naratra, olon-tsotra efatra voatifitra. Ireo no vokatr’ilay savorovoro niseho tao amin’ny kaominina Soanindrariny, distrikan’Antsirabe II, ny alarobia 18 janoary lasa teo.
Karate "Open de Paris" : Tsy tafiditra 10 voalohany ireo solontenantsika
Ratsy ny vokatra ho an’ireo mpikatroka taranja karate mpila ravinahitra nisolo tena antsika tamin’ny "Open de Paris", izay notontosaina tany Frantsa tamin’iny faran’ny herinandro iny.
Baolina Kitra - Analamanga : Hatao amin’ny alahady ireo famaranana tsy mbola vita
Ho fantatra amin’ny alahady ho avy izao, etsy amin’ny kianjan’Alarobia, izay hisalotra ny ny anaram-boninahitra tompon-dakan’Analamanga eo amin’ny diviziona faharoa sy ny "intersection" amin’ny taranja baolina kitra.
Mahavoky : Telo lahy nisandoka olon’ny "Fis" naka fiara Sinoa
Lehilahy telo no niditra an-keriny tao an-tranona Sinoa teny Besarety ny sabotsy maraina teo. Norahonan’izy ireo ilay Sinoa ary nilazany fa tsy maintsy savainy ny tranony noho ny antony mampiahiahy.
Hazakazaka am-bisikileta : Hianavaratra indray ny "Tour de Mada"
Hiainga avy any Nosy Be ny andiany fahasivy ho an’ny fihodinana am-bisikileta an’i Madagasikara amin’ity.